Nzira yekuwedzera sei kukosha kweMovement pane iyo Apple Tarisa | Ndinobva mac
Uye kune vazhinji vashandisi vanotibvunza nezvazvo sezvo vachangobva kutenga iyo nyowani Apple Watch. Mhinduro yacho iri nyore asi Ichokwadi kuti huwandu uhu hweKcal hwatinoda kupisa haugadziriswe zuva nezuva muzuva rimwe chete kana kuti ndoda kuisa sedenga muzuva redu, saka zvinogoneka kuti tinozviwana tiri mumamiriro ekuda kuwedzera huwandu uhu uye tisingazive kuzviita.
Zvekare, zvakakosha kujekesa kuti nzira yakanakisa yekuwana manhamba akanaka kugara uchipfura padiki padiki, nenzira iyi, kunyangwe tikasasvika kune yeMovement manhamba, tichagara tichidarika chiratidzo chekutanga (kana kazhinji nguva dzose. ) saka izvo zvichave zvakanaka kwazvo kumuviri wedu.
l Movement denderedzwa inoratidza mangani anoshanda macalorie awakatsva kusvika parizvino. Kusvikira chinangwa cheMazuva ese chekupisa nekupisa anoshanda macalorie zuva rega rega zvinoreva kuti hatisi kufamba zvakanyanya uye zvinoshanda macalorie, kusiyana nemakoriyori pazororo, ndeavo vatinopisa nekumira kana kuramba tichishanda. Tinogona kusimudza kana kudzikisa chiyero ichi kune zvatinoda, kwete senge muKurovedza muviri kana Kumira zvinangwa izvo hazvigone kuchinjwa.
Kune izvi isu tinongofanirwa kupinda muapp Apple Tarisa chiitiko uye wobva wadzvanya chero skrini (ForceTouch) kuitira kuti sarudzo mbiri dzibude: Pfupiso yevhiki kana shanduko yekufambisa, isu tinosarudza iyo yechipiri uye tinogona kuchinja chinangwa. Zvakareruka seizvi. Izvo zvinofanirwa kuve pachena kuti kuzadzisa zvinetswa zvatinokurudzira muAction app zvakakosha kuti uve wenguva dzose, saka chiuya, zvipe!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekuwedzera kukosha kweMovement paApple Watch
Eddy Cue anosimbisa kuti tichava neruzivo rwakawanda nezve Apple TV chirongwa munguva pfupi